Slovenia waxay qarka u saaran tahay inay noqoto caasimadda dalxiiska tacaburka ee Yurub
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Slovenia » Slovenia waxay qarka u saaran tahay inay noqoto caasimadda dalxiiska tacaburka ee Yurub
Safarka Dalxiiska • Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • kariska • dhaqanka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dadka • jiga • Waajib ah • Ammaanka • Wararka Slovenia • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Slovenia waxay qarka u saaran tahay inay noqoto caasimadda dalxiiska tacaburka ee Yurub.
Ololihii dhawaa ee Guddida Dalxiiska Slovenia waxa uu keenay halka loo socdo nolosha iyaga oo diiradda saaraya dalxiiska tacaburrada, quruxda dabiiciga ah iyo jardiinooyinka qaranka.
27% ka mid ah jawaab bixiyaasha sahanka ayaa sheegay in ay caadiyan ballansadaan fasaxyada tacaburrada.
'Adventure iyo sport' waa nooca shanaad ee ugu caansan fasaxa, waxayna si gaar ah ula dhacsan yihiin soo-booqdayaasha dhaqanka ee Slovenia: Czechs iyo Dutch-ka.
Dalxiisayaal badan ayaa u hanqal taagaya meelo bannaan oo cagaaran bilo guriga ka dib.
Iyada oo ay dhiirigelinayso ololaheedii dalxiiska caalamiga ahaa ee dhowaan diiradda lagu saarayay dalxiiska tacaburka, Slovenia ayaa la filayaa in ay aragto dalxiiska gudaha u soo gala oo kor u kaca ilaa 5.7 milyan oo soo galooti marka la gaadho 2024, oo ah 22% korodhka heerarkii hore ee masiibada.
Marka loo eego falanqeeyayaasha warshadaha safarka, 'ciyaaraha iyo isboortiga' waa nooca shanaad ee ugu caansan fasaxa, waxayna si gaar ah ula falgalaan booqdayaasha dhaqameed ee Slovenia: Czechs iyo Dutch.
Slovenia waxay hoy u tahay qaar ka mid ah muuqaalada ugu cajiibsan Yurub laakiin waxa ay si la yaab leh u soo dhaafeen dalxiisayaal badan. Si kastaba ha ahaatee, the Guddiga Dalxiiska ee IsbaanishkaOlolihii dhawaa waxa uu keenay halka loo socdo nolosha isaga oo diiradda saaraya dalxiiska tacaburrada, quruxda dabiiciga ah iyo jardiinooyinka qaranka.
Sahan dhowaan la sameeyay warshadaha, 27% ka mid ah jawaab bixiyaasha ayaa sheegay in ay sida caadiga ah ballansadaan fasaxyada tacaburrada. Dalxiiska tamashlaha ayaa sidoo kale cadeeyay inuu aad ugu faafo qaar ka mid ah SloveniaSuuqyada isha ee muhiimka ah sida Czech Republic iyo Nederland, iyadoo ay kala yihiin 40% iyo 32% jawaab bixiyaasha ay xuseen in tani ay tahay nooca fasaxa ee ay sida caadiga ah ballansadaan.
Waqtiga ololaha xayeysiinta Slovenia ayaa ku habboon. Dalxiisayaal badan ayaa u hanqal taagaya meelo bannaan oo cagaaran bilo guriga ka dib. Baahida loo qabo safarka tacaburka ah waxay arki doontaa dalxiiska caalamiga ah oo si dhakhso leh ugu soo kabanaya Slovenia marka loo eego qaar ka mid ah meelaha kale ee Yurub.